Banyere Anyị - Shenzhen Yuebaixiang Technology Co., Ltd.
Yonye Baixiang Technology Groupanọwo na-azụlite teknụzụ na-anwụ anwụ maka afọ 20, na-eme ya nke ọma, na-ewe ndị ọkaibe, kpebisiri ike ịbụ ọnwụ kacha mma na-anwụ na China, ma na-eme ka ụwa ghara ịnwe ozi ọnwụ. Anyị factory ekpuchi ebe ndị karịrị 3,000 square mita. E nwere ihe karịrị 100 talent na R&D na mmepụta.
E nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50 mbubata CNC gburugburu mma mma dị larịị na-arụ ọrụ igwe, igwe na-arụ ọrụ igwe, igwe eji eme ihe eji eme ihe na mma. Etching mma, ngwaike ebu, QDC ebu, na-ekpo ọkụ zọ efere, electric osise efere, mwekota eletrik, osisi mma na plastic mma, electronic osisi, wdg
Yue Baixiang anọwo na ụlọ ọrụ na-akpụzi mma maka afọ 20 ma nwee nnukwu ahụmịhe ahụike. Ka ọ dị ugbu a, ihe karịrị usoro iri na abụọ enwetala asambodo ikike obodo. Na mgbakwunye na-enwe nkà na ekwentị mkpanaaka ngwa, siri ike na elu-nkenke ngwaahịa (dị ka ọla kọpa foil, aluminum foil, tin foil, iron oxide, metal ntupu waya na ndị ọzọ ọla na sịlịkọn roba, graphite mpempe akwụkwọ, UPE Long), PC, ịkwanyere , PET na ihe ndị ọzọ iji nweta ọrụ akpaka) ma dị ọcha ma dị mma maka mkpofu mkpofu, 100% kwụsie ike ma dịgide! Ebu niile emeela ule atọ ma ọ bụ anọ dị nro (nyocha mma mma, nyocha dị elu na obere, nyocha ngwaahịa na-anwụ anwụ).
Gị afọ ojuju bụ anyị mgbe niile na-achụ. Anyị dị njikere ịrụ ọrụ ọnụ na ụlọ ọrụ gị maka uru ọ bụla ma nweta ọnọdụ mmeri-mmeri! Anabata ọhụrụ na ndị agadi ahịa ileta na-eduzi, na jikotara aka ịzụlite-anwụ-ọnwụ ebu technology! Yue Baixiang na-atụ anya ọbịbịa gị na nduzi gị!
E nwere 50 tent nke CNC kpọmkwem nhazi igwe, nnukwu-ọnụ ọgụgụ laser akụrụngwa, akpaka mma-ekwe igwe na 10 tent nke osise igwe, anwụ-ọnwụ Nchikota edoghi na 3-akụkụ ule akụrụngwa na anyị ụlọ ọrụ.
Anyị nwere ndị ọrụ R&D ọkachamara.
Na afọ 20 nke ahụmịhe ọkachamara n'ọhịa.
Zuru okè flatness mkpụmkpụ oge nke tooling ukpụhọde ma melite mmepụta arụmọrụ.
High nkenke anwụ-ebipụ ngwaahịa na siri ọdịdị anwụ-ebipụ ebi akwụkwọ ngwaahịa nwere ike arụpụtara na ule na ngwa nke Nwụrụ.
Professional Die-ebipụ Nchikota edoghi na punching akụrụngwa, nwere ike ahaziri ngwaahịa na nwalee na-anwụ maka ndị ahịa.
Ka ụwa ghara ịnwụ ọnwụ ọnwụ.
Duru ndi mmadu nma ka ha buru ulo oru bara uru n’uwa.
ịbụ onye mbụ na ụlọ ọrụ na-akpụzi mma nke China na 2024.
Workdị ọrụ anyị
nlezianya na ngwa ngwa ịrapara na nkwa ahụ.
Omenala dị mma
Ogo ngwaahịa dị iche iche.
arụmọrụ, ihe ọhụrụ, ibu ọrụ, otu, iguzosi ike n'ezi ihe.
Laser anwụ, Ebibi-Drop ịrụzu Rotary Die, Nkpuchi Rotary Nwụrụ, Nchekwa onwe-ihe ijuputa osise Die, Ulo Oru enyo enyo, Steel Die osise,